» “ओलीले भने- गोरु ब्याउँदैन भन्थे, ‘सर्वाेच्च अदालतमा गोरु ब्यायो, अहिले गोरु ब्यायाे मात्र होइन, पाँचवटा बाच्छा पायो’ “ओलीले भने- गोरु ब्याउँदैन भन्थे, ‘सर्वाेच्च अदालतमा गोरु ब्यायो, अहिले गोरु ब्यायाे मात्र होइन, पाँचवटा बाच्छा पायो’ – हाम्रो खबर
“ओलीले भने- गोरु ब्याउँदैन भन्थे, ‘सर्वाेच्च अदालतमा गोरु ब्यायो, अहिले गोरु ब्यायाे मात्र होइन, पाँचवटा बाच्छा पायो’
“काठमाडौं :-“एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्ने न्यायाधीशलाई अमेरिकाबाट इमेल आएको दाबी गरेका छन् ।”
“पोखरामा शुक्रबार प्रेस चौतारी नेपालको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘एकजना न्यायाधीशको अभिव्यक्ति हुन्छ, एउटा इमेल आउँछ । अमेरिकाबाटै इमेल आउँछ । केपी ओलीको सरकार ढाल्नु नै थियो ”
“नढाली भएको थिएन, किन ? न्यायाधीशको के बिगारlदिएको थियो त्यो सरकारले ? वर्गीय पूर्वाग्रह, दुराग्रह र विकास विरोधीको एउटा षड्यन्त्रको हिस्सेदार भएर सरकार ढाल्ने काम भएको थियो ।”
“संविधान बाहिर गएर आफू नेतृत्वको सरकार ढालेको आरोप लगाउँदै उनले अदालतले सरकार बनाउने बताए । ‘संविधान बाहिर गएर सरकार ढालियो,’ उनले भने, ‘ संविधान बाहिर गएर जननिर्वाचित प्रगतिशील सरकारलाई ढालेका छौँ । संसदले सरकार बनाउने र भत्काउने गर्छ ।”
“संसद र जनप्रतिनिधिको काम हो । अदालतको होइन । तर, नेपालमा, एकपल्ट एकजनाले भनेका थिए, गोरु ब्याउँदैन भन्थे, सर्वाेच्च अदालतमा गोरु ब्यायो, । अहिले गोरु ब्यायाे मात्र होइन, पाँचवटा बाच्छा पायो ।”